Kutapira Kunzwa - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Muviri Rubha Maoko mana Nuru Slide Tantra kuchirapa
Yakadziya Nuru Gel
Mhoro, zita rangu ndinonzi Bella. Ini ndinobva kuUnited States, kunyanya California. Ndine makore makumi maviri nemana. Ndinoda kudzidzira kukwiza nyama, ndine ruzivo rwakanyanya. Ini ndinotapira uye ndakanatswa, ndinoda kusangana nevatengi vangu. Iko kukwiza kwangu kuri kushinga uye kutandara, mamiriro ekunze anogara achityisa kwazvo. Ini ndinoda kutamba nemafuta ekushambadza uye nzira dzakasiyana dzekukwiza muviri. Ini ndinodawo zvinyoro nyoro mumhepo. Iko kushambadza kwangu kune zvechikadzi uye kwenyama, vatengi vangu vanogara vachirangarira mameseji angu. Ndine maroto ekurota. Muviri wangu wakanaka, ini ndiri munhu anokwezva anoyevedza uye ndinofarira kupfeka zvipfeko zviri pamuganhu wekushusha. Ini ndiri nyanzvi yekukwiza muviri, ndinofunga ndiri akakunakira masseuse kwauri. Dzimwe nguva vanonditi runako rweAmerica. Wakamirira chii?
Nyudza mune ecstasy neyedu yekugeza masaji - kuzorora zvakadaro panguva imwechete chiitiko chinonakidza. Iyi kurapwa inotanga mushawa, kwaunoshandisa maminetsi gumi kudziya uye kuzunza chill. Hondo dzemvura dzichashambidza kuneta kwemaitiro ako ezuva nezuva uye kugadzirira muviri wako kuti usakanganwe mafaro enyama. Ruzivo rwako ruchaenderera mberi mumubhedha wakasununguka paunenge uchinge uine maminetsi makumi matanhatu ekuwandisa muviri. Masseuse ane hunyanzvi uye ane hunyanzvi epamoyo yedu anoshandisa tsika dzese dzehunyanzvi uye erootic mameseji ekuti iwe unzwe hwakazara hwakawanda hwekunakidzwa kwekunakidzwa. Maoko akasimba uye akapfava emasauseuse achazorodza nyama dzese dzakaneta dzemuviri wako uye osunungura simba repabonde rakaunganidzwa muzasi musana. Nhengo yega yega yemuviri wako inonzwa kuzorora kwekupedzisira pamwe chete nemufaro unopa simba.
Mushure meawa izere yekukwiza muviri, unenge wagadzirira kukwikwidza kwechirongwa, inova maminetsi gumi anoshamisa emuviri-kune-muviri kukwiza muviri. Muviri-kune-muviri kukwiza muviri kwese kwese paunenge uine wakazara-muviri kukurudzira. Kusiyana nedzimwe mhando dzekukwiza muviri, mativi ese emuviri wako kubva kumusoro kusvika kumagunwe kusanganisira epachivande zvikamu zvichakwizwa nemuviri wakapfava uye wakanaka wemuviri uye unopisa masseuse yeimba yedu.
AROMATIC MASSAGE MAFUTA ACHAITA KUTI GANDA RAKO RINONYANYA KUKONZESA MASSEUSE KUTI MUVIRI WAKO UNOGONESA PASI PAMUSORO WAKO MUVIMBO UCHIPA KUGARA KUNAKIDZWA KUFARA.
Mushure mekusvika panhongonya yekunakirwa panguva yemuviri-kune-muviri kukwiza muviri chirongwa ichi kurapwa kuchazopedzwa mukukurumidza kuita bhaidhi nekurapa kwedu kubvisa mafuta ekuzora. Shower masaji ichakubatsira iwe kusunungura kusagadzikana kwehupenyu hwako hwezuva nezuva uye kutamisa pfungwa dzako munyika yemhando yepamusoro mafaro. Kunze kwechiitiko chisingakanganwiki chenyama, masaja ekugezesa ane marapirwo ebhenefiti echinyakare kukwiza muviri.
MASHOKO EEROTIC MUPARIS
Erotic massage salon inoshanda 24/7. Izvi zvinoreva kuti unogona kunakidzwa chero nguva. Ingotibata nesu nefoni kuti tizivise nezve inguva yekushanya uye zvaunoda. Padanho rino, iwe unofanirwa kusarudza mhando yeemaotic mass, sarudza huwandu hwevasikana uye udza kana mamwe masevhisi achidikanwa - kubvarura, mukana wekubata, kutsvoda kana zvimwe zvingasarudzwa. Muchikamu "Wedzerai" pane peji "Mhando dzemass uye mutengo."
Kana iwe uine kusahadzika uye iwe usingazive kuti ndeupi mupi wezano anofanira kusarudza, mupangamazano wedu achafara kukubatsira iwe kusarudza. Ingotiudza nezve zvako zvido - mwenje, wakasimba, unorapa, wakajairika masaja kana imwe. Chero mibvunzo inonakidza inogona kubvunzwa nefoni. Nezve data rekutaurirana, ona chikamu che "Maficha".
Unenge watotarisira musikana. Tinosangana pamusuwo. Kutevedzera zvinodiwa nehutsanana, tinokoka mutengi kuti ageze. Iwe uchagashira rinorasirwa jira rekugezesa, sipo, kuraswa maslippers. Inonyatsonaka.
Kupfuurirazve, wedu ane hushamwari uye ane hunyanzvi maneja anoitisa kubvunzurudza pfupi kana iwe uri kushanyira erotic mass salon kekutanga. Mushure mekupfupisa - kusangana nevasikana. Mifananidzo inogona kutariswa online pawebhusaiti. Mushure mekusarudza, iwe enda kunogeza uye woenda kune yega imba yekutandarira uye uwane mafaro enyama.
Iyo masseuse inopa yakazara izere masevhisi zvinoenderana nechirongwa chakasarudzwa - "Double Pleasure", "European", "YeVakadzi", Nuru massage, kukwiza muviri kana imwe. Chikamu chega chega chinotanga neyakareruka nzira yekugadzirisa. Izvi zvinokutendera kuti ubvise kushushikana, zorora mutengi uye umugadzirire kumwe kunakidzwa. Yakasarudzwa-zvakanaka, mafuta anonhuwirira ekumabvazuva anowedzera kutapira kwekunzwa. Kubata kwemasseuse kunopa kutonyanya kufara. Zvino zvese zvinoitika sekupihwa nehurongwa hwakasarudzwa. Uyu unogona kunge uri wekutamba wakasarudzika, yekugezera yakabatana, kutsvoda, Thai erotic masaja kana mamwe masevhisi ayo asingasanganisi kurara pabonde. Kushanda kushambadza kunoderedza kuneta. Mhedzisiro yesarudzo ipi neipi yezvirongwa inogara yakafanana.
NEI UCHIFANIRA KURAIRA EROTIC MASSAGE SERVICES:
Uku ndiko kumuka kwekushuva;
Kusimbisa immune system;
Kuvandudza potency muvarume;
Kushungurudzika uye kunetseka kunetseka;
Kusvika iyo yepamusoro nzvimbo yekunakidzwa.
Muvhuro: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Chipiri: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Chitatu: 10: 00 AM - 11: 00 PM
China: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Chishanu: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Mugovera: 10: 00 AM - 11: 00 PM
Svondo: 10: 00 AM - 11: 00 PM